Professional Diploma In Strategic Management | Profeso Business Institute (Myanmar)
Call From +959 955 91 3333
Email From info@profesomm.com
About Profeso Recognition Services & Facilities
Executive Diploma in Business Management Professional Diploma in HR Management Professional Diploma in Strategic Management Professional Diploma in Financial Management
Home > Professional Diploma In Strategic Management
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ "မင်း ရေအရမ်းငတ်နေတဲ့ အချိန်ကြမှ ရေတွင်းတူးဖို့သတိရနေခဲ့ရင် (ရေတွင်းမတူးခဲ့တာကို နောင်တရနေခဲ့ရင်) တော်တော်လေးကိုနောက်ကျသွားပြီ" လို့ဆိုထားပါတယ်။
မည်သည့်အရာကိုမဆို အလိုရှိရင် ကြိုတင်စီစဉ် ဗျူဟာချပြီး စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ကို ဒီဆိုရိုးလေးက ရည်ညွှန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်စီမံတတ်ခြင်း (သို့) Plan ရှိခြင်း၊ Plan ဆွဲထားတတ်ခြင်း အလေ့အကျင့်ဟာ အောင်မြင်သူတွေအားလုံးရဲ့ အကျင့်စရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင် Plan ချ စီမံထားခြင်းမရှိပဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းဟာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အားအင်တွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးဆောင်ဦးရွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြရတဲ့ ခေါင်းဆောင်များဟာ မဟာဗျူဟာကျကျ ကြိုတင် စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
မဟာဗျူဟာကျကျ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟာ ရေရှည်အောင်မြင်ဖို့အတွက် သော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်တွေကို ချမှတ်မယ်။ အဲ့ဒီချမှတ်ထားတယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားနိုင်ဖို့၊ ပြီးမြောက်စေဖို့နှင့် ပိုင်ဆိုင်ရယူနိုင်ဖို့ သေချာရေရာတဲ့ အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Strategic Management ကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Lincoln University College & ETVA မှ စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီး အောင်မြင်ပါက Lincoln University College & ETVA မှ ပေးအပ်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Diploma ရရှိပါမည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်၍ ဘွဲ့ယူနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ5Star Hotel ကြီးများတွင်လည်း ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားဖြင့် Diploma လက်မှတ်များ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Strategy Generation and Selection
စသည်တို့ကို အသေးစိတ်သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
B.Com (Q), M.Com
Program Fees – 320,000 Kyats
စာမေးပွဲနှင့် Lincoln University College ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ကြေး 80 USD နှင့် ညီမျှသောမြန်မာငွေကျပ် (for Exam & Registration Fees)
Final Exam မဖြေဆိုလိုသူများ စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။
Stategic Management Textbook Fees – 15,000 Kyats
သင်တန်းစအပ်အပ်ချင်း (၈) သောင်းကျပ်
သင်တန်းဖွင့်တဲ့နေ့ရဲ့ တစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာ (၆) သောင်း
သင်တန်းဖွင့်တဲ့နေ့ရဲ့ နှစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာ (၆) သောင်း
သင်တန်းဖွင့်တဲ့နေ့ရဲ့ သုံးလပြည့်တဲ့နေ့မှာ (၆) သောင်း
သင်တန်းဖွင့်တဲ့နေ့ရဲ့ လေးလပြည့်နေ့မှာ (၆) သောင်း
အရစ်ကျ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတည်း ပေးချေပါက 5% Discount ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
Profeso VIP Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လိုလျှင်သော်၎င်း၊ ကဒ်ပိုင်ရှင်မှ မိမိ၏ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအား လိုက်လံအပ်နှံပေးလျှင်သော်၎င်း 5% Discount ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
2019 © Profeso Business Institute. All Rights Reserved.
Address : Pa-44, Tha Pyay Gone Pwe Yone Tan, Tha Pyay Gone Market, Nay Pyi Taw.
Phone : 09 6919 60 333, 09 751 822 333, 09 955 91 3333, 09 40 336 222 3
Email : info@profesomm.com
© 2020 Profeso Business Institute . All Rights Reserved. Web Design by NetScriper